Misfit Vapor X: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Misfit dia iray amin'ireo marika malaza indrindra amin'ny sehatry ny smartwatches, miaraka amin'ny maodely toa ny Shine 2, izay noresahinay taminao taloha. Namela antsika smartwatch vaovao izao ilay orinasa, izay mampiasa ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa. Ity maodely ity dia ny Misfit Vapor X, izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy, ka fantatsika rehetra momba izany.
Ny marika dia manolotra antsika famantaranandro tsara kalitao, miaraka amin'ny fahaleovan-tena tsara, hazavana ary famolavolana sahaza hampiasana. Ka ity Misfit Vapor X ity dia maodely mahaliana ny mpanjifa maro izay mieritreritra ny hividy famantaranandro. Izy io dia mahatanteraka asa maro andrasana amin'ity karazana vokatra ity.
Ny marika dia naniry ny hanasongadinana ny fahazavan'ny famantaranandro, izay milanja 43 grama fotsiny, noho izany dia safidy ahazoana fampiononana lehibe isan'andro, tsy isalasalana fa andinindininy manan-danja ho an'ny mpampiasa maro. Indrindra raha resaka fanatanjahan-tena no aseho azy ho antsipiriany lehibe amin'ity famantaranandro ity.
1 Misfit etona X famaritana
Misfit etona X famaritana
Araka ny nohamafisin'ny orinasa, ity Misfit Vapor X ity dia manana efijery AMOLED 1,19 mirefy, miaraka amin'ny savaivony 42 mm. Amin'ity tranga ity dia andiany tokana amin'ny famantaranandro io, tsy afaka hisafidy ny habeny amin'ity tranga ity izahay. Ny fisafidianana tontonana AMOLED dia fanoloran-tena amin'ny famolavolana kalitao, ary koa ny famakiana tsara kokoa noho izay eo amin'ny efijery. Ho fanampin'izany, ny famantaranandro dia hanome antsika safidy fanamorana marobe, satria tonga miaraka amina tadim-bika silika dimy azo ovaina. Na dia afaka mampiasa azy amin'ny tadiny 20 mm aza isika.
Raha ny momba ny fikirakirana, ny orinasa dia manolo-tena amin'ny kilasika amin'ity sehatra ity. Snapdragon Wear 3100 no ampiasaina, izay iray amin'ireo processeur quintessential ao amin'ny Wear OS. Tonga amin'ity tranga ity miaraka amin'ny RAM 512 GB sy tahiry anatiny 4 GB, araka ny nohamafisin'ny orinasa. Ity mpikirakira ity dia manampy mihoatra ny zava-drehetra hanana fiainana bateria lava kokoa, satria miaraka amin'ny maody fitehirizana angovo, sns.
Raha ny marina, ity Misfit Vapor X ity dia hanome antsika fizakantena roa andro. Ho fanampin'izay, tsy tokony hohadinointsika fa manana famahanana haingana, asa izay tsy isalasalana fa tena liana amin'izany. Satria hanome antsika ny fahafahana mameno tanteraka ny famataran'ora amin'ny adiny iray ity. Izy io koa dia miaraka amin'ny charger magnetika, ahafahanao mandoa 80% ao anatin'ny 50 minitra. Safidy roa tsara amin'izany.
Ny rafitra miasa amin'ity tranga ity dia Wear OS, izay miaraka amin'ny mifanentana amin'ireo telefaona Android 4.4 na avo kokoa na iOS 10 na avo kokoa. Toy ny mahazatra noho ny fampiasana an'ity rafitra fiasa ity, ny Misfit Vapor X dia manome antsika ny fifanarahana handraisana lahatsoratra sy hiantsoana fampandrenesana, fanairana amin'ny kalandrie ary asa hafa mahazatra. Etsy ankilany, manana fanaraha-maso hetsika koa izahay.
Hamela anay hanara-maso tanteraka ny fahasalaman'ny mpampiasa, noho izany dia manana sensor tahan'ny fo izahay. Izy io koa dia miaraka amin'ny rindranasa mifangaro antsoina hoe Cardiogram, natao hanaraha-maso ireo famantarana lehibe ananan'ny mpampiasa. Ankoatr'izay, ny GPS dia manana GPS, ary izy io koa dia manana Spotify napetraka amin'ny toerana misy anao ary manana NFC izahay, mba hahafahana mandoa vola amin'ny alàlan'ny Google Pay.
Ny etona misfit X Azonao atao ny mividy azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny tranokala an'ny orinasa. Toa amin'izao fotoana izao dia io no teboka tokana ahafahantsika mividy azy. Tsy nisy ny antsipiriany nomena momba ny fandefasana azy any amin'ny magazay, saingy mety hisy vaovao bebe kokoa momba an'io fotoana io.
Navoaka tamin'ny famatorana dimy samy hafa ny famataranandro, izay azo isafidianana. Ny loko no hitanao amin'ny sary, ka ho an'ny tsiron'ny mpampiasa tsirairay amin'ity lafiny ity. Ny vidiny dia mitovy amin'ny tranga rehetra, $ 279,99, izay manodidina ny 250 euro hanovana. Ahoana ny hevitrao momba ity smartwatch vaovao avy amin'ny marika ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Misfit Vapor X: Ny smartwatch vaovao miaraka amin'ny Wear OS
Nokia hamoaka fanavaozana ny fiarovana ny telefaona mihoatra ny 2 taona
Ny Gigaset GX290 no finday avo lenta vaovao misy bateria monster 6,200 mAh